आश्चर्य - Film Shala TV
एकता मंचद्वारा सहयोग रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं, भदौ २ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको मञ्च अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चले दुर्घटनामा परी खुट्टा भाँचिएका विरामीलाई सहयोग गरेको छ । मञ्चले रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–४ कोइरालखर्क निवासी र हाल भारत तमिलनाडु, चेन्नैको पर्शाबाक्कममा कार्यरत श्री रेखिराम सुनारलाई भारतीय रकम ३३,८९० सहयोग...
परिवारका पाँचै जना घरभित्र मृत फेला
काठमाडौं, असार २० । भारतको गजियाबादस्थित न्यू शताब्दीपुरको एउटा घरमा श्रीमान् श्रीमती र तीन सन्तानसहित पाँच जना मृत फेला परेका छन् । पाँचैजनाको मुखमा कालो टेप बेरिएको अवस्थामा मृत फेला परेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । घटना हत्या या आत्महत्या भन्नेबारे केही नखुलेको प्रहरीको भनाई छ । अनुसन्धान जारी र...
१४ वर्षदेखि कोमामा रहेकी महिलाले जन्माइन् स्वस्थ बच्चा !
काठमाडौं, असार १५ । लामो समयदेखि कोमामा उपचाररत एक महिलाले स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएको विषयले अहिले चर्चा बटुलिहरेको छ । अमेरिकाको एरिजोना राज्यको एक अस्पतालमा विगत १४ वर्षदेखि कोमामा उपचाररत एक महिलाले बच्चा जन्माएकी हुन् । फिनिक्स क्षेत्रमा पर्ने हेसिन्डा हेल्थकेयरको एउटा क्लिनिकमा उनी भर्ना भएक...
काठमाडौं, जेठ १४ । उत्तरी ब्राजिलको एक कारागारमा ४२ कैदी मृत फेला परेका छन् । घटनाको एक दिनपहिले अमेजनस राज्यको उक्त कारागारमा १५ जनाको ज्यान जाने गरी झडप भएको थियो । त्यसको एकदिनपछि भनै ठूलैसंख्यामा कैदीहरु मृत भेटिनाले घटना रहस्यमय बनेको छ । ब्राजिलका सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, अमेजन राज...
ट्युबवेलबाट पानी निकाल्दा ग्यास निस्कियो
माथागढी गाउँपालिका–२ रुप्सेस्थित सोलेमा सिँचाइका लागि पाइप गाड्दा जमीनमुनिबाट प्राकृतिक ग्यास निस्केको छ । सिँचाइका लागि पानी निकाल्न ट्युबवेल गाड्ने क्रममा जमीनमुनिबाट ग्यास निस्किरहेको छ । स्थानीय ताराबहादुर कुमालको जग्गामा ट्युबवेल गाडेर पानी निकाल्ने क्रममा ग्यास निस्केको हो । फलामको पा...
सुनको ट्वाइलेटको नाम अमेरिका !
बैशाख २३ । बेलायतको ब्लेनहाइम प्यालेसमा सुनको ट्वाइलेट कमोड जडान गरिँदैछ । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विंस्टन चर्चिल जन्मिएको उक्त दरबारको कोठासँगैको कोठामा उक्त सुनको ट्वाइलेट जडान गर्न लागिएको हो । यो कमोड १८ क्यारेट सुनको हुने द गार्जियनकाले जनाएको छ । इटालियन कलाकार मौरिजो क्याटिलेनको...
काठमाडौं, बैशाख १९ । भारतको कश्मीरमा ४० जनाको ज्यान जाने गरी हालै गराइएको आत्मघाती आक्रमणको जिम्मेवारी लिएका समूहका नेता मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले आतङ्कवादी घोषणा गरेको छ । सुरक्षा परिषदले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौलाना मसुदको सम्बन्ध अलकायदासँग रहेको भन्दै उनलाई आतंककारी घोषणा ग...
काठमाडौं, वैशाख १८ । भेनेजुएलामा पुनः हिंसा शुरु भएको छ । विपक्षी नेता ख्वान गुइदोले राष्ट्रपति निकोलस मादुरोविरुद्ध सैन्य विद्रोहको आह्वान गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यहाँ हिंसा सुरु भएको हो । राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले सत्ता नछाडेपछि गुइदोले सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनका लागि आह्वान गरेक...
आर्थिक संकटपछि जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या
काठमाडौं, वैशाख १५ । वित्तीय संकटमा गुज्रिरहेको जेट एयरवेजका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । कम्पनी नै आर्थिक संकटमा परेका बेला त्यसमा आवद्ध कुनै पनि कर्मचारीहरुले समयमा पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यसैको मार खेप्न नसकी जेट एयरवेजका प्राविधिक कर्मचारीले भने आत्महत्या नै गरेका छन् । ५३ वर्...
सियान, वैशाख १२ । चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेकी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागतका लागि चीनमा नेपालको झण्डा फहराईएको छ । भ्रमणका क्रममा सान्सी प्रान्तमा सरकारले राखेको होटेल पिपल्स ग्रान्डको छतमा नेपाल झन्डा फहराइएको हो । समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा पुगेकी राष्ट्...
रहेनन् भियतनामका पूर्व राष्ट्रपति जनरल ली
काठमाडौँ । भियतनामका पूर्व राष्ट्रपति जनरल ली डक आन्हको निधन भएको छ । ९९ वर्षको उमेरमा उनकाे सोमबार निधन भएकाे हाे । जनरल लीको नेतृत्वमा कम्बोडियामाथि सन् १९७८ मा भएको आक्रमणकै कारण विवादास्पद खमेर रुजको शासनसत्ता पतन भएको थियो । दक्षिण भियतनाममा अधिकांश समय बिताएका जनरल ली भियतनामलाई उप...
भारतमा तेस्रो चरणको मतदान सुरु
नयाँ दिल्ली, वैशाख १० । भारतमा लोकसभाको तेस्रो चरणको मतदान सुरु भएको छ । मंगलबार १३ राज्य र केन्द्रबाट शासित २ प्रदेश गरी १ सय १७ लोकसभा सिटका लागि मतदान हुँने भएको हो । सबै आ–आफ्नो सिटका लागि १ हजार ६ सय १२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उभिएका छन् । जसमध्ये ३ सय १४ उम्मेदवार र...
चर्च र होटलमा विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या डेढ सय पुग्यो, चार सय घाइते
काठमाडौं, वैशाख ८ । श्रीलंकामा चर्च र होटलमा भएको श्रृङ्खलावद्ध विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या १३७ पुगेको छ भने ४ सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् । आइतबार इसाई धर्मावलम्बीले इस्टर पर्व मनाइरहेका बेला तीन वटा चर्च र कोलम्बोको फाइभ स्टार होलल गरी जम्मा ६ वटा बम विष्फोट भएको थियो । घटनामा हालसम्म १३७ जन...
हार्दिक पटेललाई मञ्चमै हानियाे झापड (भिडियाे सहित)
काठमाडौं, वैशाख ६ । कांग्रेस आईका नेता हार्दिक पटेललाई मञ्चमा भाषण गर्दागर्दै एक स्थानीयले थप्पड हानेका छन् । पटेलले भाषण गरिरहँदा उनको दायाँतर्फबाट एक व्यक्ति आएर अनायासै झापड हान्दै केही कुरा बोलेका छन् । गुजरातको सुरेन्ददरनगर जिल्लामा आयोजित ‘जन आक्रोश सभा’को मञ्चमा भाषण गरिरहेक...
कोलड्रिंक पिएपछि ब्रेकअप !
एजेन्सी । पति–पत्नी, ब्वायफ्रेन्ड–गर्लफ्रेण्डबीचको सम्बन्धलार्इ सामान्य घटनाले पनि टुटाउन सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् चीनका एक जोडी । जहाँ युवकले आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई कोलड्रिंक पिउँदा खर्च गर्ने भन्दै ब्रेकअप गरेका छन् । यो घटनाको चीनको हो । डेटिंमा निश्केका एक जोडीले दि...
पाढेको भन्दै सहकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर, २० करोडको क्षतिपूर्ति माग
काठमाडौं, चैत १३ । ‘आयो गयो पाद केको बादविवाद’ नेपाली उखानै छ । पेटमा भएको गडबडीसँगै पाढ आउने गर्दछ । कसैले लुकेर पाढ्छन् त कसैले खुलेआम । अष्ट्रेलियामा भने पाढेकै विषयलाई लिएर मुद्धा दर्ता गरिएको छ । जहाँ सहकर्मीले पाढेको भन्दै क्षतिपूर्ति २० करोड पनि माग गरिएको छ । सुन्दा पनि...
रामेछापमा भैँसीले पायो ६ खुट्टे पाडो
रामेछाप, फागुन २३ । मन्थली नगरपालिका वडा नं–४ सालुमा एक किसानले पालेको भैसीले ६ खुट्टे पाडो जन्माएको छ । गैराथोकका किसान वलकबहादुर आलेमगरले पालेको भैँसीले सो पाडो पाएको हो । ६ खुट्टे उक्त पाडो अरु ४ खुट्टे पाडो जस्तै उभिने र सहजै भैसीको दुध खाने गर्दै आएको छ । सामान्य पाडोको हुने चार...
भैसी सुन्दरी प्रतियोगिताका विजेतालाई लैनो भैसी
इनरुवा, माघ १५ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ । उक्त भैसी प्रतियोगिताक विजेतालाई अर्काे लैनो भैसी उपचार दिइएको छ । कोशीकटानमा सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा ९० भैसीको सहभागिता रहेको थियो । त्यसमध्ये विन्देश्वर इशरको भैसी विजेता बन्न सफल बनेको हो । विजेत...
विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध मानिसको निधन
टोकियो, माघ ७ । विश्वकै सवैभन्दा वृद्ध मानिसको निधन भएको छ । जापानीका ती वृद्ध मानिस मासानो नोनाका १ सय १३ वर्षको उमेरमा आइतबार मृत्यु भएको जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस्‌का अनुसार नोनाकाको जन्म सन् १९०५ को जुलाईमा भएको थियो । उनको जन्म अल्वर्ट आइन्स्टा...
विश्वकै चिसो सहर जहाँ दुई महिना सूर्य नै देख्न पाइँदैन
एजेन्सी, पौष १७ । रुसको साइबेरियास्थित नोरिल्स्क नामक एक सहर छ, जहाँ वर्षमा नौ महिनासम्म हिउँ जम्छ भने दुई महिना त सूर्यको अनुहार नै देख्न पाइँदैन । त्यसैले पनि उक्त दुई महिना त्यहाँ दिन÷रात नै अँध्यारो हुन्छ । उक्त सहरको वाषिर्क औषत तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियस छ भने ठण्डी याममा...